Accueil > Gazetin'ny nosy > Intsy sy Nday: Mba menatra ry zalahy a !
Intsy sy Nday: Mba menatra ry zalahy a !
Rehefa ny olona iray no miankin-doha amin-javatra iray na amin’olona hafa na amin’ny rafitra iray dia tena manaiky hohandevozin’iny iankinany iny. Tamin’ny andro fahiny, ny andevon-kanina no tena manala baraka teo amin’ny fiaraha-monina malagasy satria vary iray lovia no anekenao ny fanandevozan’ny olona miantoka ho anao iny vary iray lovia iny.
Tsy misy valaka amin’izany ny mpisehatra pôlitika malagasy maro amin’izao taona arivo fahatelo izao. Ilay toe-tsaina miankin-doha amin’ny any ivelany na amin’ny vahiny no mahatonga an-dry zalahy mpisehatra pôlitika malagasy sasany ireny tsy hahalala menatra intsony fa dia manaotao fahatany.
Omaly alarobia ohatra izao dia nikarakara atrik’asa momba ny « etika pôlitika » sy ny « ady amin’ny kolikoly » ho an’ny mpisehatra pôlitika malagasy tetsy amin’ny trano fandraisam-bahinin’i Colbert ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana (Pnud) sy ny fikambanana alemanina « Friedrich Ebert Stiftung » (Fes). Ny tanjona tamin’izy io, hono, araka ny nambaran’ny mpikarakara dia ny fitondrana anjara biriky amin’ny fandrafetana ny demokrasia eto Madagasikara, mba ho pôlitika madio no hampiharina eto amin’ny firenena.
Dia kinga sy nihazakazaka ary mailaka toa akohokely mahita rehoka, sanatriavin’ny vava ireo mpisehatra pôlitika manaiky hambanian’ny vahiny. Isan’ireny i Marc Ravalomanana, Ramanantsoa Ramarcel Todisoa (Mts), ny sekretera jeneralin’ny Psd ; Eliana Bezaza, sy ny hafa…
Dia resaka « etika pôlitika » sy ady amin’ny kolikoly ve no iankohofana amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ? Fanalana baraka ny tena kosa izany e ! Mirehaka ery ny mpiseraseran-dRavalomanana manindrahindra azy tamin’io fa hoe tonga nandray anjara tao. Tsy mahafantatra ny lanja ara-pôlitikany fa mampirefarefa amin’ny tany ny haja amam-boninahiny.
Maro amintsika olom-pirenena ankehitriny koa ny tsy nahafantatra ny tantaran’izany « Fondation Friedrich Ebert » izany tany ambadika ny 50 taona lasa tany. Ny Fianakaviambe iraisam-pirenena eo ambany vahohon’ny Firenena Mikambana moa dia fantatra ny tetiny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Endriky ny fampidinana ho ambany ny hasin’ny fanaovana pôlitika eto Madagasikara ny fanasinana atrikasa toa ireny omaly ireny e !